काठमाडौं : नयाँ प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईरीको प्रशिक्षणमा विश्वकप तथा एसिया कप छनोट खेलबाट टोलीमा सकारात्मक ऊर्जा मिलेको राष्ट्रिय फूटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले बताएका छन् ।
छनोट अन्तर्गतका पछिल्ला ३ खेल खेलेर हिजो राती नेपाल फर्किएको टोलीले कुवेत भ्रमणबाट धेरै कुरा सिक्न पाएको कप्तान तथा गोलकिपर किरणले बताएका हुन् । टोलीका पुराना खेलाडीसमेत रहेका उनले पहिले र अहिलेको टोलीमा धेरै भिन्नता देखिएको अनुभव साटेका छन् ।
छनोट खेलकै लागि एसियन फूटबल कन्फेडेरेशनको पहलमा नेपाल आएका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताईरीको प्रशिक्षण र शैलीले टोलीमा सकारात्मक ऊर्जा मिलेको उनले बताए । खेलाडीहरुमा मनोबल बढेको र नतिजाका लागि आँतुर रहेको किरणको अनुभव छ ।
इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेल र छनोट चरणमा आफूभन्दा स्तरीय टोलीसँग खेल्दा नेपालले राम्रो नतिजा निकालेको र यस्तो म्याच एक्सपोजर पाएमा नेपाली फूटबलको स्तर वृद्धि हुने किरणको विश्वास छ ।
विश्वकप तथा एसिया कप छनोट अन्तर्गत नेपालले कुवेतमा चाइनिज ताइपेईलाई हराउँदा जोर्डन र अस्टे«लियासँग भने पराजित भएको थियो । हारसँगै एसिया कप छनोटको तेस्रो चरणमा सोझै प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना सकिएको छ । अब नेपालले एसिया कप छनोटको तेस्रो चरणमा पुग्न प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल फर्किएपछि कप्तान चेम्जोङसँग गरिएको कुराकानी :
कुवेतको तीनवटै खेल हेर्दा सुधारिएको देखेको छु । हामीले हाम्रो बलियो पक्षलाई केलाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । आउँदा दिनमा सकारात्मक विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसरी नै अगाडि बढ्दा नेपालको फुटबल विकासले गति लिन सक्छ ।
चाइनिज ताइपेईसँगको खेलमा हामीले विगतको नतिजालाई निरन्तरता दिन सक्यौं । जोर्डन र अस्ट्रेलियासँगको खेलमा भने विगतको नतिजालाई क्रमभंग गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । हामी कहाँ चुक्यौं ?
पहिलो लेग उसकै घरेलु मैदानमा जितेकाले दोस्रो लेगमा पनि सुखद नतिजा निकाल्न हामी पूर्ण रुपमा तयार थियौं । कुवेत जानुअघि इराक भ्रमण गरेर लिएको उपलब्धिले हाम्रो मनोबल बढ्यो । कोच र असिस्टेन्ट कोचले दिएको निर्देशनलाई खेल अवधिभर पालना गर्‍यौं । पेनाल्टीबाट अग्रता लिएसँगै खेलाडीमा हौसला मिल्यो । पछि दोस्रो गोल पनि निस्कियो ।
जोर्डनविरु’द्धको खेल टफ थियो । पहिलो लेगमा गोलको मार्जिन धेरै थियो । पहिलो लेगमा पेनाल्टीबाट हामी पछि परेका थियौं । दोस्रो लेगमा पनि सोही अवस्था भयो । नचाहँदा नचाहँदै गल्ती भयो । सामान्य गल्तीले खेल गुमाउन पुग्यौं । सुधारको प्रयास गरे पनि अलमलमा पर्‍यौं । अंक खोस्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिए पनि ३–० ले हार्‍यौं । समग्रमा राम्रो प्रदर्शन गरेका हौं ।
अस्ट्रेलियासँगको खेललाई कसरी नियाल्नुहुन्छ ?
उत्कृष्ट टोलीसँग खेल्न पाउनु हाम्रो लागि मौका रह्यो । पहिलो लेगभन्दा दोस्रो लेग फरक थियो । पहिलो लेगमा फिल्ड सेयर गर्न पाउनु हामीलाई उपलब्धिमूलक थियो । पहिलोमा हामी अनुभव बटुल्ने लक्ष्यमा थियौं भने दोस्रो लेगमा प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्ने लक्ष्य राखेका थियौं । सोही अनुसार तयारी पनि गरेका थियौं । पहिलो हाफमा १० खेलाडीमा सीमित भए पनि समग्र टोली एक बनेर खेल प्रदर्शन गर्न सफल भयौं ।
वान म्यान डाउनमा पनि हामीले बलियो अस्ट्रेलियालाई रोक्यौं । अस्ट्रेलियासँगको खेलमा नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शनमा निकै सन्तुष्ट छु । एसियाको पावर हाउससँग खेल्न पाउँदा हाम्रो लागि अनुभव भयो । आउँदा दिनमा अन्य एसियाका पावर हाउससँग खेल्नुपर्छ र पाउँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरिया, जापान, इरान जस्ता टोलीसँग खेल्न पाउँ ।
बलियो टोलीसँग खेल्न पाउँदा नेपाली फुटबलको स्तर सुधारिन्छ । जितका लागि खेल्नुभन्दा पनि अनुभवका लागि यस्ता खेलले धेरै सहयोग गर्छ । नेपालले पनि प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश विश्वभर जान्छ । ठूलो अन्तरले हारेको भए पनि दोस्रो पटक आमनेसामने हुने अवसर पाउँदा सुधारिएको खेल देखायो भन्ने सन्देश दिन सक्छौं भन्ने अस्ट्रेलियासँगको खेलले प्रमाणित गरेको छ ।
प्रशिक्षक अल्मुताइरीको रणनीति भ्रमणमा सफल भएको हो ?
कोचको निर्देशनले धेरै अर्थ राख्छ । कोचले बाटो देखाउने हो । नेपाली टोलीलाई सम्हाल्नु भएका नयाँ प्रशिक्षक अबदुल्लाहले सबै खेलाडीको माइन्डमा ‘वि क्यान प्ले फुटबल’ भरिदिन भएको छ । जति बलियो प्रतिद्वन्द्वी भए पनि हामीले फुटबल खेल्न सक्छौं भन्ने मानसिकता भरिदिनुभएको छ ।
उहाँको प्रेरणाले नयाँ खेलाडीमा प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्न सक्छौ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । नयाँ खेलाडीमा फाइटिङ स्प्रिट विकास भएको छ । प्रशिक्षकको योजना फुटबललाई एक स्टेप माथि लैजाने छ । त्यसका लागि हामीले उहाँलाई साथ दिएका छौं ।-ताजा खबर टिभि
२०७८ असार ३, बिहीबार २३:४५ गते 1 Minute 486 Views